Locko Gracious: Kisah angling dharma versi bahasa igbo
Angling Dharma bụ a akụkọ mgbe na Javanese omenala, nke a na-ewere dị ka ihe incarnation nke Vishnu, ọnụ ọgụgụ nke eze n'ala-eze Mlowopati. Otu n'ime ihe ùgwù ọ bụ inwe ike mara asụsụ nke ụmụ anụmanụ nile. Ke adianade do, ọ na-akpọkwa dị ka a n'agbụrụ Arjuna, a Central ọgụgụ na akụkọ nke Mahabharata. Ọ na-akọrọ patihnya, Batik Madrim ike ime ka Mlowopati-adị ukwuu iji merie ihe ndị dị mkpa agha.
Angling Dharma a maara dị ka eze nke ji amamihe na. Ọ bụkwa ama nwere ike nọrọ n'okpuru ya mba ma na-mara maka inwe a dịgasị iche iche nke ihe nrite dị ka Kris Gburugburu Geni, Arrow Pasopati, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye na n'ili nke King angling Dharma e nwekwara n'ili nke Duke, Batik Madrim na e nwere ndị na miri nnọọ emi ọgba bụ ọgba nne nne Pikulun Dragon Eze ukwu Prabu angling Darma. E wezụga na-eli ozu, e nwekwara a oge ochie, nke bụ ka nọ keramatkan site obodo.
Ruo ugbu a na ịdị adị nke n'ili nke King angling Dharma ka na mgbagwoju anya n'ihi na naanị ihe ndị mere ọnụ. Ụfọdụ akwụkwọ na-ekwu na, Prabu angling Dharma kwụsịrị na Bojonegoro a ugbu a-enwe a oge nke ntaramahụhụ ma amam-ikpe nime a grouse.
Atara ya ahuhu site chi nwanyị Uma na Dewi Ratih maka imebi ya nkwa ya agaghị alụ di ọzọ dị ka ngosipụta nke ịhụnanya o nwere n'ebe chi Setyowati onye gburu onwe ya. Iro nke nkwa mgbe Uma na Dewi Ratih nwalee ịkwụsi ike nke na nkwa site na-apụta na-a Nne nne na nwa agbọghọ mara mma nke yiri chi nwanyị Setyowati. Runtuhlahlah okwukwe na Eze. Mgbe ahụ, ọ mara ikpe a nke ugboro abụọ site a nnukwu nwaanyị mara mma nke na a nwoke-eri nnụnụ dị ka grouse.
Na-esote njem, ọ bịarutere na Wonosari, Bojonegoro na ndị fọdụrụ nke akụkọ ọ bụ ịlụ Dewi Srenggono, Trusilo, na Mayangkusuno ahụ ma mesịa ọtụtụ ụmụ ya.
Eze alaghachighị eze Mlowopati na nwunye ya na nwa. Mgbe e mere ka ịbụ wakpoo Mlowopati Pancadnyono a ibu eze, na nloghachi nke King Mlowopati, mgbe ahụ, na agha a merie, ọ bụ ezie na Batik Madrim na ndị agha na-achịkwa.
Otú ọ dị, ọ bụghị ụfọdụ ma King biri na Mlowopati ruo mgbe ọgwụgwụ nke ndụ ma ọ bụ. Ya mere, ruo taa bụ ka a ogologo arụmụka banyere ọnọdụ nke n'ili nke King angling Dharma.
Ruo ugbu a angling Dharma King n'ílì n'obodo Pati na-ukwuu gara njem ala nsọ. E wezụga na a ebe njem uka, na ebe a na-eji dị ka njem nleta ebe nkiri n'ihi na e Nogorojo Spring na Spring Nogonini-emetọghị emetọ.